२४ जेठ, काठमाडौं । आजभाेलि सहरमा चिया र कफी दुवैकाे फेसन बढ्दाे छ । कफी पसलहरु मात्र हाेइन, चिया पसलहरु पनि खुल्ने क्रम बढ्दाे छ । र, धेरैले चिया वा कफी के पिउने भन्ने आफ्नाे राेजाइ पनि बुझिसकेका छन् । कतिलाई चिया नै मन पर्छ भने कतिलाई कफी । तर, स्वास्थ्यका हिसाबले कुन ठीक त ? चिया कि कफी ?
अनुसन्धानहरुका अनुसार पहिले कफीभन्दा चियामा बढी क्याफाइन हुन्छ । तर, पाकिसकेपछि कफीमा धेरै क्याफाइन रहन्छ । हाम्राे शरीरलाई दिनभर काम गर्नका लागि चाहिने शक्तिका लागि क्याफिन फाइदाजनक हाे तर अत्याधिक क्याफिन हाम्रा लागि ठिक नहुन सक्छ । त्यसैले याे सन्दर्भमा कफीभन्दा चिया नै राम्राे मान्न सकिन्छ ।
चियामा हुने एन्टीअक्सिडेन्ट्सले हाम्राे शरीरलाई डिटक्स गर्न सहयाेग गर्छ । झन् ग्रिन टीमा याे बढी हुन्छ । कफीमा एन्टीअक्सिडेन्ट्स चियाभन्दा निकै कम हुने भएकाले याे अर्थमा पनि चियालाई राम्राे मान्ने गरिएकाे छ ।
तर यदि काेही पनि व्यक्ति मधुमेहकाे बिरामी हाे भने उसले चियाभन्दा कफी पिउनु राम्राे मानिन्छ । कफीलाई टाइप टु डायबिटिजकाे खतरा कम गर्ने पेय पदार्थका रुपमा पनि लिइन्छ । शरीरकाे ताैल घटाउन पनि चियाभन्दा कफी राम्राे मानिन्छ । तर, जिम वा अन्य कुनै अभ्यास नगर्नेहरुलाई चाहिँ ब्ल्याक टि नै राम्राे हुने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
अग्ला टापुमा आन्तरिक पर्यटकको चासो
एनसेलले सानिमा बैंकका ग्राहकलाई निःशुल्क सिम कार्ड र निःशुल्क इन्टरनेट प्याकेज दिने
बजेट अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा संसद सचिवालय